🥇 ▷ Samsung Galaxy Note 10 Plus: tijaabo ✅
Samsung Galaxy Note 10 Plus: tijaabo
Samsung Galaxy Note 10 Plus ee tijaabada: Jadwalka waxyaabaha ku jira
Samsung Galaxy Note 10 Plus: Muuqaalka koowaad ee fiidiyowga
Samsung waxay haysataa Galaxy Note 10 iyo Galaxy Note 10 oo lagu daray sanadkaan markii ugu horeysay labo NoteSmartphones. Galaxy Note 10 waxyar ayuu ka yar yahay, wuxuu leeyahay qarash hoose oo muujinaya, malaha kaarka xusuusta, batteriga yar, kamaraduhu kumalaha qalabka ‘ToF’. Ayaa raba kan ugu fiican, waa inuu hadda sameeyaa Galaxy Note 10 Plus, kaasoo markiiba si toos ah noogu dhiirrigaliyay bilowga. Saaxiibkiis Frank wuxuu qabsaday muuqaalkiisii ​​ugu horreeyay ee muuqaalka kore.
Waxaan tijaabineynaa Samsung Galaxy Note 10 Plus oo leh 4G modem oo Samsung ku iibinaya 1099 euro. Moodhkan wuxuu leeyahay 12 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo xusuusta gudaha ah. Nooca leh modemka 5G wuxuu ku kacayaa 100 euro oo dheeraad ah. Midka caadiga ah ee Galaxy Note 10 150 euro kayar. Haddii aad si sax ah u qaadatid, markaa waxaa jira saddex taleefanno casri ah oo laga xulan karo.
Samsung Galaxy Note 10 Plus ee tijaabada: Natiijooyinkeena
1. Miyuu Samsung Galaxy Note 10 Plus yahay mid aad u weyn?
Runtii waa inaan qiraa Samsung Galaxy Note 10 Plus oo leh 6.8 inji cabirka shaashad cabirku waa mid aad u fiican gacanta. Kala-guurka dambe ee udhaxeeya galaaska iyo bir-birisku ma aha sidii markii Galaxy Note 9. Telefonka casriga ah wuxuu xoogaa fudud yahay 196 garaam Note 9, oo culeyskiisu yahay 20 garaam.
Adeegsiga hal gacan oo dhab ah ayaa qeyb ahaan macquul ah. Xaaladaha badankood, waa inaad isticmaashaa gacanta labaad si aad u caawiso, si aadan u socodsiin khatarta taleefanka casriga ah ee gacantaada ka baxa. Tan waxaa xitaa lagu doorbiday jirrid jilicsan iyo dhabarka dambe ee dhalada.
2. Sidee ayuu u fiican yahay soo bandhigida Samsung Galaxy Note 10 Plus?
Khasab kuguma aha inaad falsafad ku saabsan sida shaashadda u eg shaashadda casriga ah ee 1099-Euro uu yahay. Shaki kuma jiro in tani ay tahay guddiga ugu wanaagsan abid ee Super AMOLED oo Samsung waligiis ku rakibay taleefanka casriga ah – taasi waa xaalad sanadeed kasta. Hase yeeshe, su’aashu waxay soo baxaysaa in daloolka dhexe ee ku yaal shaashadda carqaladayso. Xaqiiqdii, godka dhexda ayaa runtii i dhibaya wax aan aad uga badnayn oo aan ahayn ama daloolka dhinaca ah mid ka mid ah Galaxy S10 Plus. Waxay umuuqataa khalad pixel weyn. Indhahaygu way sii warwareegaan aagga. Intaa waxaa dheer, godku had iyo jeer waa muuqdaa. Marka la joogo Galaxy S10 Plus waxay si fudud ugu baaba’aysaa fiidyow ama ciyaar dhinac ah. Waa inaan qiraa inaan gebi ahaanba khaldanaa fikirka ah in dalool dhexda ka xanaaqsan ka yar yahay dhinaca.
Samsung Galaxy S10 Plus iyo Galaxy Note 10 oo lagu daray. (Isha: GIGA).
Muuqaalka “Dynamic AMOLED bandhigay” wuxuu leeyahay geesaha dhinacyada oo dhan wuxuuna daboolayaa ku dhowaad dhammaan taleefanka gacanta. Waxaan jeclahay summetry geesaha dusha sare iyo kan hoose ee casriga. Soosaarayaasha kale badiyaa waxay heystaan ​​bushimaha oo aan ciriiri ahayn. Muuqaalka muuqaalka ah ee ‘Edge’ wuxuu i dhibayaa taleefankaan casriga ah laakiin wuxuu ka badanyahay kan loo yaqaan ‘Galaxy Note 9.’ Waxaan kiciyaa galitaan aan sax aheyn inta badan. Cidhifka dambe wuxuu noqday mid cidhiidhi ah, taas oo horseedda in taasi sax tahay. Daaweyntu waxay abuurtaa qolof.
Bacon ayaa si ku habboon noogu deeqay laba kiis:
Presidio Grip wuxuu hubiyaa kalsooni aamin ah oo gacanta ku jirta.
Presidio Stay Clear waa mid muuqda oo aan qarinaynin naqshadda taleefanka casriga gabi ahaanba.
Labada kiisba waa kuwo aad u adag oo ilaaliya taleefanka casriga ah markay dhacdo illaa afar mitir. Thanks to technology Microban, kiiska sidoo kale waa bakteeriyada bakteeriyada. Qolof ahaan waxaad xaqiiqdi dareemeysaa xasilooni. Naqshadeynta ugu dhow ee aan xad lahayn ee Samsung Galaxy Note 10 Plus waa mid aad u jilicsan. Waxa aan jeclahay waa moodalka gacanta, nooca cad ayaa xoogaa aan u yara jilicsanayn. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kiisaska ‘Speck’
3. Sidee loogu kalsoonaan karaa qalabka dareeraha faraha ee shaashadda?
Daacadnimo ahaan, waxaan u arkaa Samsung Galaxy Note 10 Plus gabi ahaanba wax farqi ah kuma uusan lahayn Samsung Galaxy S10 Plus. Khabiirka sawirka faraha ee shaashadda wali ma shaqeynayo sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa qalabka baaritaanka sawirka faraha. Waqti dheeri, booska dareemaha ayaa si sax ah loo heli karaa. Furitaanka taleefanka casriga laakiin sii wadaysa qaadashada dib u dhac yar. Mararka qaar waad la qabsan doontaa. Laakiin xalkaani maahan mid aan fiicnayn.
4. Sidee bay faa’iido u leedahay dhaqdhaqaaqyada cusub ee ‘S Pen’?
Tan iyo Samsung Galaxy Note 9 waxaad u adeegsan kartaa S Pen ee taleefanka casriga sida koontaroolka fog. Iyada oo Galaxy Note 10 Plus ay soo bandhigeyso Samsung ma ahan oo keliya cimri batari dheer oo qalinka ah, laakiin sidoo kale xakamaynta dhaqdhaqaaqa. Waxaad ka wareejisan kartaa masaafad ahaan, tusaale ahaan, soo bandhigid leh kubad ama beddel moodeelka kamaradda. Runtii waxaan la yaabanahay hadii uu jiro qof sidaas sameeya nolol maalmeedka. Had iyo jeer waxay u muuqataa mid qabow ee fiidiyowyada Samsung, laakiin nolosha dhabta ah taasi waa mid cakiran. Xaqiiqdii, dhaqdhaqaaqyadu ma shaqeynin sidoo kale waxay u baahan yihiin wax soo saar. S Pen wali waxaa loo adeegsan karaa kicinta kaamirada – oo taasi runtii waa muuqaal aan ku leeyahay Galaxy Note 9 oo badanaa aan isticmaalo.
Guud ahaan, S Pen-ka cusub ee shaashadda weyn wuxuu u shaqeeyaa sidii caadiga ahayd. Qoraallada waxaa lagu keydin karaa shaashadda shaashadda. Markaad qoraalo qaadato, isla markiiba waa la qorayaa. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad raadiso qoraalada gacanta ku qoran. Shaqo xariif ah oo runtii leh qiimo aad u weyn.
5. Kaamirada cusub ma la tartami kartaa tartanka?
Imtixaan kaamirada laga soo qaaday Samsung Galaxy Note 10 Plus taleefanka casriga ah sifiican ayuu ula yaabay. Marka laga reebo zoomka 50x, Huawei wuxuu isku dhex daray P30 Pro, taleefanka cusub ee Samsung wuxuu sii wadan karaa tartanka ka socda Shiinaha. Gaar ahaan marka loo eego iftiinka hooseeya iyo habka habeenkii ee Samsung ayaa si weyn kor ugu kacay barnaamijka software-ka. Inbadan oo ku saabsan tan oo ah tijaabada kamarada:
6. Sidee ayuu u dhakhso badan yahay Samsung Galaxy Note 10 Plus?
Samsung waxay leedahay Galaxy Note 10 Plus kaliya kuma tabaruceen processor-ka cusub, laakiin sidoo kale xusuusta UFS 3.0. Qalabka casriga ah ee loo yaqaan ‘Galaxy-S10 smartphones’ waxaa kaliya lagu rakibay xusuusta UFS 2.1. Natiijo ahaan, taleefanka casriga aad ayuu u shaqeeyaa. Barnaamijyada iyo cayaaraha ayaa si dhakhso leh loo raraa. Thanks to 12 GB ee Ram, barnaamijyada ayaa waliba ku jira bakhaar isla markaana si dhakhso ah uma xidhna. Tani waxay sahlaysaa in la beddelo barnaamijyada dhexdooda. Waxqabadka sare ayaa loo badinayaa inuu sii ahaanayo sidaas mustaqbalka mustaqbalka xasuusta degdegga ah.
Waxaan haysanaa Samsung Galaxy Note 10 Plus isbarbardhiga halbeega ah marka loo fiiriyo Galaxy Let S10 Plus iyo Huawei P30 Pro oo tartamaya. Natiijooyinka waa kuwo cajiib ah, laakiin mararka qaarkood la yaab:
7. Miyaad qabtaa Samsung Galaxy Note 10 Plus maalin shaqeyneysa?
Samsung ayaa lagu rakibay Galaxy Note 10 Plus oo ah batari 4,300 mAh ah. Taasi waa 300 mAh in kabadan Galaxy Note 9 iyo 200 mAh in kabadan Galaxy S10 Plus. Bandhigu wuxuu leeyahay shaashad sare oo shaashadda ah oo ah 6.8 inji, si in yar oo xoog tamar sare leh looga fili karo. Nolosha batteriga ee Samsung Galaxy Note 10 Plus waa mid aad u wanaagsan. Waxaan gartaa soo-bandhigidda saacadaha 7 illaa 8 saacadood. Marka waxaad si fudud uga badbaadin kartaa maalin shaqo.
Waxa aan si togan u arkay: nolosha batteriga ee hab hurdada. Muddada imtixaanka in ka badan sedex usbuuc, taleefanka casriga ah sidoo kale wuxuu ahaa marmar mararka qaar waqti dheer. Waqtigan xaadirka ah, nolosha batteriga si dhib yar ayey u dhacday. Laakiin waxaan haystaa, sida taleefan kasta oo Samsung ah oo aan tijaabiyo, bandhiga had iyo jeer waa naafo. Tani maahan mid aan fiicnayn, maxaa yeelay ma jiro wax ogaysiin ah oo loo yaqaan ‘LED’, laakiin xilligan ayaa xoogaa kordha – taas oo aniga ii ah muhiimad weyn.
8. Maxaa ka maqan Samsung Galaxy Note 10 Plus?
Farsamo ahaan, kani waa Samsung Galaxy Note 10 Plus ilaa iyo maanta. Waxa kale oo jira astaamo badan oo faa’iido badan leh, laakiin qaar baa laga yaabaa in mar kaliya la istcimaalo. Si kastaba ha noqotee, qodobbada soo socda ayaa saameyn xun igu leh:
Ma jiro barkad dalool leh 3.5 mm oo la rakibay. In kasta oo Samsung ay dejiso qalabka dhegaha ee USB-C, haddana waxay waxtar u leeyihiin oo keliya xaalad degdeg ah. Mid ka mid ah ayaa sidaas darteed ku dhawaad ​​lagu qasbay inuu isticmaalo telefishanka Bluetooth Adaparka aad ku xiriiri karto dhagaha dhegaha leh ee leh 3.5 mm ayaa ka maqan baaxadda gaarsiinta.
Waxaan haynaa Samsung Galaxy Note helay 10 Plus midabka “Aura Glow”. Midabka dhabarku wuu isbedelaa iyadoo ku xiran hadba iftiinka, laakiin guud ahaan wuxuu ku sii jeedaa dhinaca cad. Qalinka la keenay waa buluug. Taasi xitaa macno malahan bilowga. Qalin cad, sida moodada cad, ayaa aad ugu habboon.
Sidee moodooyinka noocan ah ee Galaxy-S10 ay u leeyihiin Samsung Galaxy Note 10 Plus oo aan lahayn wax digniin ah oo loo yaqaan ‘LED’. Qof kasta oo damiya shaashadda had iyo jeer ah si uu u badbaadiyo tamarta ayaa sidaas ku jira hagaajinta waana inuu u baneeyaa shaashadda oo dami si loo arko haddii ay jiraan wax ogeysiisyo cusub ah.
Samsung Galaxy Note 10 Plus waxaa lagu soo oogi karaa 45 watts. Laakiin waa kaliya 25-watt koronto oo lagu soo daray. Qiimo dhan 1,099 € waxaad filan kartaa inaadan u baahnayn inaad soo iibsato koronto aad u xoog badan marka lagu daro.
9. Miyaan ka imaan lahaa Samsung Galaxy Note 9 bedel?
Samsung Galaxy Note 10 oo lagu daray iyo Galaxy Note 9. (Source: GIGA).
Maya. Waxaan leeyahay Samsung Galaxy Note 9 mana dareemayo inaan ahay aniga oo ah in Galaxy Note 10 Plus ay tahay inay isbedelaan. In kasta oo kaameeradu aad uga fiican tahay, laakiin shaqsiyan waxay khalkhal gelineysaa daloolka qadka dhexe ee shaashadda si aad ah ayaan u la qabsan kari waayey intii lagu jiray baaritaanka oo dhan. Dhinaca Galaxy With the dhinaca daloolka, S10 Plus dhib dambe kuma aysan aheyn waqtiga. Guud ahaan, taleefanka casriga aad ayuu qaali iigu yahay. Waxaan hayaa Ogeysiiskan 9 waqtigaas oo leh Smartwatch Gear S3 xirmada ku dhawaad ​​850 yuuro. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ogaaday inaan runtii u baahnayn S Pen.
Samsung Galaxy Note 10 lagu daray iyo Note 9 marka la barbar dhigo:
Ayaa dhinaca kale ah mid ka weyn Mid ka mid ah kuwa loo yaqaan ‘Smart-Smartphone’ oo leh kan ‘S Pen’ oo aan awoodin inuu sameeyo la’aantiis, wuxuu ku xumaa Galaxy Note 10 Plus midka ugu fiican ee casriga ah.
Samsung Galaxy Note 10 oo lagu daray imtixaanka: Gunaanad
Galaxy Note 10 Plus waxay muujineysaa halka la aado mustaqbalka. Samsung ma rabto inay dib u dhigto farsamo ahaan iyo muuqaal ahaanba. Nashqadeynta ku dhawaad ​​xuduudaha ee dhinaca hore iyo muuqaalka hagaagsan ee dhabarka iyada oo la raacayo habeynta dambe ee kamaradda waxay u egtahay mid aad u fiican. Daloolka shaashadda ayaa aad u yara indhahayga ku jira. La yaabi maayo haddii kamaradi hore uu goor hore baaba’o shaashadda oo uu noqdo wax aan muuqan. Laakiin weli diyaar uma tihid. Naqshaddu waxay ku habboon tahay wakhtiyada casriga ah waxayna ku qancisaa gebi ahaanba khadka.
Waxqabadka iyo qalabka farsamada ayaa ah heerka ugu sareeya. Muddadii tijaabada ahayd ee saddex toddobaad, waligey ma dareemin in Samsung Galaxy Note 10 Plus uu yahay mid gaabis ah ama ka daalaya jawaabta. Processor-ka cusub, xusuusta deg-degga ah iyo 12 GB oo ah RAM ayaa xaqiijinaya in taleefanka casriga ahi ku shaqeynayo xawaaraha hillaaca. Aynu rajeyneyno inay sidaas ku sii jiri doonto mustaqbalka.
Kaameerada seddexda ah si fiican ayey ila yaabisay. Samsung Galaxy Note 10 Plus ayaa ugu dambeyntii la tartami kara Huawei P30 Pro iyo Google Pixel 3. Tartanka ayaa dib u cusbooneysiin doona Samsung oo laga yaabo inaysan luminin xiriirinta. Waxaan sidoo kale igu qancay nolosha batteriga iyo xarkaha. Ayaa helaya taleefankan casriga ah, marka hore wuxuu ku iibsadaa qalinka darteed.
Dhaleeceyn Waxaan u hayaa wax yar oo ka mid ah maqnaanshaha jaakada muusigga ah ee 3.5-mm ah, korontada ku jirta iyo koronto maqan. Qiimaha 1,099 Yuuro ayaa indhahayga ku badan. Haddii qodobbadaani aysan ku dhibin, waxaad heli doontaa Ogeysiiska 10 Plus oo ah midka ugu fiican Samsung illaa iyo hadda.
Samsung Galaxy Note 10 oo lagu daray imtixaanka: qiimeynta
Shaqada, dareenka iyo nashqadeynta: 5/5
Telefoon iyo maqal: 5/5
Battery iyo nolol maalmeedka: 4/5
Samsung Galaxy Note 10 lagu daro iyo Galaxy Note 10: Xogta farsamada marka la barbar dhigo
Samsung Galaxy Note 10 Plus Samsung Galaxy Note 10
bandhig 6.8 inch WQHD + Muuqaal firfircoon AMOLED oo leh 3.040 × 1.440 pixels iyo HDR10 + 6.3-inch FHD + muuqaal firfircoon AMOLED oo leh 2,280 × 1,080 pixels iyo HDR10 +
processor Samsung Exynos 9825 Octa-Core processor (2.7 GHz + 2.4 GHz + 1.9 GHz)
xusuusta aan tooska ahayn 12 GB RAM 8 GB RAM
Xusuusta gudaha 256 ama 512 GB + booska microSD 256 GB (ma jiro microSD booska)
Kamarad (gadaal) Camera Quad:
Xagal ballaadhan: 16 MP f / 2.2
Xagal ballaaran: 12 MP AF f / 1.5 illaa f / 2.4 OIS
Tele: 12 MP f / 2.1 oo leh OIS
Kamarad Saddex-geesood ah:
Xagal ballaaran: 12 MP AF f / 1.5 illaa f / 2.4 oo leh OIS
Kamarad (hore) 10 MP AF f / 2.2
software Android 9 Pie oo leh Samsung One UI
isku xirnaanta WLAN 802.11 a / b / g (2.4 GHz), Wi-Fi 4, 5, 6 (2.4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM
Bluetooth 5.0, ANT +, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, GLONASS, Beidou
Cabirrada 162.3 × 77.2 × 7.9 mm 151.0 × 71.8 × 7.9 mm
Miisaan 196 garaam (4G), 198 garaam (5G) 168 garaam
Ku dallaci batariga 4,300 mAh oo leh awood koronto degdeg ah (45 watts ayaa la taageeray, 25 xamaal watt lagu daray),
Kicinta bilaa wireless ilaa 15 watts 3,500 mAh oo leh awood koronto dhakhso leh (25 watts),
Kicinta bilaa wireless ilaa 15 watts
kala duwan Sawir-gacmeedka sawir-qaade sawirka muuqaalka (ultrasound), Dolby Atmos stereo ku hadla oo leh AKG tuning, USB head head USB waxaa ka mid ah, majiro 3.5mm jaakadood, biyo-celin iyo boodh-ka-boodboodka IP68, Wireless Power Share.
Midabada Aura Glow, Aura White iyo Aura Black Aura Glow, Aura Pink iyo Aura Black